JOURNÉES DES ÉCOLES 23-24-25 FÉVRIER 2022 | Akamasoa
Ry mpianatra Akamasoa !
Samy faly isika satria mankalaza ny Journées des Écoles.
Kanefa na dia faly sy ravo, dia tsy maintsy mahalala fa « Ady ny fiainana » , hoy ny ohabolana malagasy ! Tsy fety ny fiainana, nefa indraindray fety ihany. Fa andavanandro dia ady , satria tsy maintsy miezaka Isika isan’andro vao mihinana sy velona, isika mifaninana amin’ny alalan’ny FANATAJAHANTENA , dia manambara fa nanao Ezaka ny “athleta”.
Avy eo ianareo dia mihazakazaka , dia ny mpihazakazaka rehetra dia tsy maintsy nanao ezaka mba ho vohalohany . Izay miezaka ihany , ary nihomana bebekokoa dia mety handresy . Izay tsy nihomana sy tsy niezaka manao “entrainement “ fanazara-tena , tsy hahahomby .
Ny fiainanatsika andavanandro dia torak’izany koa , tsy maintsy miezaka isika mandresy ny ratsy , mandresy ny fahakiviana , mandresy ny rendrarendra , mandresy ny fahakamoana , mandresy ny tsy firarahiana , mandresy ny fitiavan-tena diso be loatra , mandresy ny fialonana , izany rehetra izany dia tsy mampahomby ny fiainantsika ary manimba ny fiaraha-monina sy toe-tsaina , ka manjary samy tia tena ary samy mandeha sy maka ho azy .
Izany toe-tsaina izany dia fahavalon’ny olombelona izay miezaka ho marina sy mendrika ary manaiky fa “Fanahy no maha olona”.
Antso avo ataoko aminareo tanora Akamasoa , dia raiso ny anjaranao amin’ny tolona masina ataontsika eto Akamasoa , mba hamerina ny zo sy ny hasina maha olona ary manana ny ho avy tsara kokoa ireo mandimby antsika . Misy olona mandrakariva mandimby antsika ary isika tsy maintsy miheritreritra sy manomana ny hoavin’ ireo ankizy izay misolo antsika indray andro any .
Antso avo , mba hitolona , Antso avo mba miezaka , Antso avo mba hiaro ny soa iombonana , Antso avo miaro ny tontolo iainana sy zava-boahary rehetra , Antso avo mba tsy hihemotra ary tsy hivily lalana ianao ry tanora lahy sy vavy eto amin’ny Akamasoa .
Ry tanora : mahafoiza-tena tanteraka hampandroso ny Tanindrazanao , fiarahamonina misy anao sy ny fianakavianao.
Ary ho loloavinao ny Finoana an’Andriamaitra Fitiavana mampiray ny olombelona rehetra amin’ny alalan’ny Rariny sy ny Hitsiny ary indrindra amin’ny FAHAMARINANA.
Ry tanora mpianatra Akamasoa, izany no vato fehijoro hijoroantsika ato amin’ny sekoly Akamasoa .
Raiso ny andraikitrao ary tanteraho izany ankalalahana , an-kafaliana sy ankasahiana . Izay tsy manana fahasahiana dia tanora mandeha ho azy , tsy misy tanjona ary farany very anatin’ny zava-mahadomelina.
Ataovy tsara sy ankafaliana ity fifaninana FANATAJANTENA androany ity .
Ry tanora lahy sy vavy ankafizo sy tiavo ny Sport rehetra , satria tsara ary talentanao izany , ka tsara raha zaraina amin’ny besinimaro.
Ny Tanora Akamasoa miavaka amin’ny fitondratena mendrika, fianarana ary koa amin’ny fitiavana ny Sport.
Ho ela velona ny mpianatra sy ny athleta Akamasoa, ny mpanabe ary ny Ray aman-dreninareo .
Samia ho tahin’Andriamanitra isika rehetra !